नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : यस्ता छन हाम्रो नेपालका नयाँ समाचार शिर्शक !
यस्ता छन हाम्रो नेपालका नयाँ समाचार शिर्शक !
- झडपका क्रममा १० जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु
- जलेश्वरमा प्रहरीको गोली लागेर तीनको मृत्यु, कर्फ्यू आदेश जारी
- संविधान जारी हुनुअघि मारिनेको संख्या ३० पुगेको छ।
- तराई मधेसमा जारी आन्दोलनमा सरकारले दमन गरेर मानव अधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै संघीय समाजवादी फोरम नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघलाई गुहारेको छ ।
- राप्रपा नेपालका सभासद संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट अलग भएसँगै संविधानसभाबाट अलग हुने सभासद् संख्या ८३ पुगेको छ। स्वतन्त्र सहित ११ दलले संविधानसभाको प्रक्रिया छाडिसकेका छन्।
- संविधानसभा छाड्ने दललाई ओलीको व्यङ्ग्य – एक दुई आँप झरेका हुन्
कसरी लेख्नु, कसरी पढ्नु, कसरी चित्त बुझाउनु !!! न जनतामा ज्ञान छ न त नेता हरु सँग इमान्दारिता ! सब बेइमानहरु नेपाल आमाको चिर हरण मा ब्यस्त छन । देशमा जातियता, क्षेत्रियता, धार्मिक, बिखन्डनको आगो दिन प्रति दिन बढ्दो छ । के यस्तै नयाँ नेपाल बनाउन २०६२ / २०६३ को आन्दोलन गरेका थियौ नेता र तिनका मतियारहरु हो ?? भनेर प्रश्न गर्नुस् प्रतिगामी भैहालिन्छ ! कठै हाम्रो नेपाल, हामी निरिह नेपाली जनता !!!